विश्वका हाइ-पेड सिइओले कतिसम्म तलब पाउँछन्? टपटेनमा ८ अमेरिकीसँगै दुई भारतीय परे :: BIZMANDU
विश्वका हाइ-पेड सिइओले कतिसम्म तलब पाउँछन्? टपटेनमा ८ अमेरिकीसँगै दुई भारतीय परे
प्रकाशित मिति: May 25, 2018 3:00 PM
कुनै पनि कम्पनीको संचालन, योजना तर्जुमा, नयाँ योजना ल्याउनेदेखि लिएर हरेक मामिला ह्याण्डल गर्ने जिम्मा चिफ एक्जेक्युटिभ अफिसर अर्थात सिइओकै हुने गर्छ। कुनै पनि कम्पनीको मेजर डिसिजन मेकिङ तहमा हुने ब्यक्ति सिइओ हो जसले एकै समयमा कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण भूमिकाहरु निर्वाह गर्छ।
वास्तवमा सिइओकै भूमिका र उत्तरदायित्व बहनबाट नै समग्र कम्पनीको संचालन प्रक्रिया अघि बढ्छ। सिइओका प्रत्येक निर्णय तथा क्रियाकलापले नै कम्पनीको बित्तीय अवस्था समेत प्रभावित हुन्छ। कम्पनीको वासलात बढाउन वा घटाउन सिइओकै मास्टरमाइण्ड महत्वपूर्ण हुन्छ जसले बनाएको प्लान वरिपरि नै कम्पनीको नाफाघाटा समेत भर पर्छ। विश्वभरका ठूला कम्पनीहरु त्यसका सिइओका कारण बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छन्।
कम्पनीहरुबीच उत्कृष्ट सिइओ ल्याउन प्रतिस्पर्धानै चल्छ। विश्वमा धेरै सिइओहरु छन् जसले ति कम्पनीहरुमा आबद्ध भएबापत निकै मोटो रकम पाएका छन्।
१० टिम कुक, एप्पल
टिम कुकको बास्तविक नाम टिमोथी डोनाल्ड हो। हाल उनी एप्पलको सिइओका रुपमा कार्यरत छन्। उनी अमेरिकी इन्जिनियर हुन् जसले सातौं सिइओका रुपमा एप्पलको कमान सम्हाले।
उनी सन् १९८८ मा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टका रुपमा एप्पलमा आबद्ध भएका थिए। एप्पल ज्वाइन गरेको २३ वर्षपछि उनी त्यसै कम्पनीको सिइओ भए। उनले अमेरिकाको राष्ट्रिय फुटबल संगठन तथा नाइके कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका रुपमा पनि काम गरे। उनको सन् २०१८ का लागि वार्षिक आम्दानी १ करोड २ लाख ८० हजार डलर तोकिएको छ।
९ स्टिभ कोलेनकोफ, क्वालकम
अमेरिकाको मल्टिनेशनल टेलिकम्युनिकेसन्स इक्विपमेन्ट तथा सेमिकन्डक्टर कर्पोरेसन क्वालकमका सिइओ स्टिभ कोलेनकोफ पेशाले इन्जिनियर हुन्।
उनले कम्पनीको प्रविधि तथा रणनीतिहरु तय गर्छन्। यस बाहेक उनले कम्पनीको संचालक समितिलाई पनि सहयोग गर्छन्। उनीलाई संसारकै सफल सिइओमध्ये एक मानिन्छ। स्टिभले भर्जिनियाँ टेकबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पढाइ गरेका हुन्। स्टिभले ६ करोड ७ लाख डलर कमाउँछन्।
८ ल्यारी इलिसन, ओराकल
अमेरिकाका लरेन्स जोसेफ ल्यारी इलिसनका नामले चिनिन्छन्। उनी उद्यमी ब्यापारी तथा परोपकारीका रुपमा पनि चर्चित छन्। उनी विश्वकै प्रसिद्ध कम्पनी ओराकलका कोफाउन्डर समेत हुन्। उनी कम्पनीका चिफ टेक्नोलोजी अफिसर तथा एक्जेक्युटिभ चेयरम्यानका रुपमा कार्यत छन्। फोर्ब्सका अनुसार उनी विश्वका सातौ धनी ब्यक्ति हुन् भने अमेरिकाका पाँचौ धनाढ्य हुन्। उनले बार्षिक ५ करोड ५० लाख डलर कमाउँछन्।
७ निक उडम्यान, गोप्रो
निकोलास डि निक उडम्यानका नामले गो प्रोका संस्थापक तथा सिइओका रुपमा परिचित छन्। उनी उद्यम क्षेत्रमा परोपकारीका रुपमा पनि चिनिन्छन् । सर्फिङमा रुचि भएका निकोलसले विश्वकै पहिलो सर्फिङ क्लब पनि खोलेका छन्। उनले बार्षिक ७ करोड ७४ लाख डलर कमाउँछन्।
६ सत्या नाडेला, माइक्रोसफ्ट
सत्यानारायणना नाडेला भारतीय मुलका अमेरिकी बिजनेस एक्जेक्युटिभ हुन्। भारतको हैदराबादमा जन्मिएका सत्या सन् २०१४ मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टका सिइओ नियुक्त भएका थिए। उनले हैदराबादको सरकारी स्कुलमा पढेका थिए। उनले भारतकै मनिपाल इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको डिग्री लिएका थिए।
हाल उनी संसारकै सफल सिइओ मानिन्छन्। उनले सिइओका रुपमा माइक्रोसफ्टमा कामम थालेदेखि माइक्रोसफ्टको शेयरमा समेत १५० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। उसले कम्पनीको मोबाइल स्ट्रयाटेजीलाई फेल हुनबाट जोगाए भने क्लाउड कम्प्युटिङमा फोकस गरे। सत्याको बार्षिक तलब १ करोड ८२ लाख डलर छ। उनले तलबबाहेक स्टक बोनसपनि प्रशस्तै पाउँछन्।
५ मारियो गाबेली, गेम्को इन्भेष्टर्स
मारियो जोसेफ गाबेली सल्लाहकार, स्टक लगानीकर्ता र बित्तीय बिश्लेषक हुन्।एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी गेम्कोका उनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने हाल रहेका मारियो कम्पनीका सिइओका रुपमा कार्यरत छन्।
फोर्ब्सका अनुसार उनी अमेरिकाका ३४६ औं धनाढ्य ब्यक्ति समेत हुन्। कोलम्बिया बिजनेस स्कूलबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा मार्टर्स डिग्री सकेका मारियो कम्पनीलाई अघि बढाउन सफल सिइओ मानिन्छन्। उनको बार्षिक तलब ८ करोड ८५ लाख डलर रहेको छ।
४ ग्रिगोरी माफेइ, लिबर्टी मिडिया एण्ड लिबर्टी इन्ट्रयाक्टिभ
लिबर्टी मिडिया कर्पोरेसनका सिइओ ग्रेग माफेइले हार्वर्ड बिजनेस स्कूलबाट एमबिए सकेका हुन्। लिबर्टी कर्पोरेसनले अमेरिकाका चर्चित इन्टरटेन्टमेन्ट बिजनेस, मिडिया तथा संचार, सिरियस एक्सएम जस्ता बिभिन्न कम्पनीहरु होल्ड गर्छ। चर्चित फर्मुला वान रेसिङ इभेन्ट पनि यसै कम्पनीले आयोजना गर्ने गर्छ। ग्रिगोरीले बार्षिक ७ करोड ३८ लाख डलर तलब लिन्छन्।
३ माइकल फ्राइज, लिबर्टी ग्लोबल
माइकल फ्राइज लिबर्टी ग्लोबलका सिइओ तथा भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुन्। कोलम्बिया बिजनेस स्कुलबाट मास्टर्स गरेका माइकल सन् २००५ मा कम्पनीका सिइओ भएका थिए। कम्पनीलाई उत्कृष्ट नतिजा दिने सिइओका रुपमा माइकल चर्चित छन्। उनले बार्षिक ११ करोड १९ लाख डलर तलब लिने गर्छन्।
२ सुन्दर पिचाइ, गुगल
भारतका सुन्दराराजन पिचाइका विश्वबिख्यात कम्पनी गुगलका सिइओ हुन्। भारतको तामिलनाडुमा जन्मिएका पिचाइ सन् २०१५ मा गुगलका सिइओ का रुपमा नियुक्त भएका थिए। पिचाइले भारतबाट इन्जिनियरिङ तथा अमेरिकाकबाट एमबिए तथा म्याटेरियल साइन्स पढेका थिए। उनले स्ट्याण्डफोर्ड युनिभर्सिटीबाट एमएस समेत गरेका छन्। पिचाइको तलब बार्षिक १५ करोड डलर तोकिएको छ।
१ डेभिड जास्लाभ, डिस्कभरी कम्युनिकेसन्स
डेभिड एम जास्लाभ डिस्कभरी कम्युनिकेसनका सिइओ हुन्। सन् १९६० न्यूयोर्कमा जन्मिएका डेभिडले एनबिसी युनिभर्सलका एक्जेक्युटिभका रुपमा पनि काम गरे।
बोस्टन युनिभर्सिटी अफ ल बाट ग्रयाजुएट डेभिडले डिस्कभरी कम्युनिकेसन्न अन्तर्गतका एमएसएनबिसी र सिएनबिसीका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा विकासका योजना तथा रणनीति तर्जुमा गर्छन्। उनको बार्षिक कमाइ १५ करोड ६१ लाख डलर रहेको छ। (एजेन्सीको सहयोमा)
विश्वका हाइ-पेड सिइओले कतिसम्म तलब पाउँछन्? टपटेनमा ८ अमेरिकीसँगै दुई भारतीय परे को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।